[MMAnime] Tsuki Ga Kirei : Tsuki Ga Kirei
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – စာသစ်နှစ်တစ်ခုရဲ့အစကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ စာရေးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသူ Kotarou Azumi နဲ့ ပြေးခုန်ပစ်အဖွဲ့က အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Akane Mizuno တို့ဟာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ အတူတူကျ ကြပါတယ် … မမျှော်လင့်တဲ့ တလွဲတချော်ပြသနာလေးတွေကပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနီးစပ်သွားစေပါတယ် … တစ်ရက်မှာ အရမ်းကိုလှပတဲ့လပြည့်ညတစ်ညမှာ နှစ်ယောက်သားအတူတူထိုင်နေကြရင်း Kotarou က Akane ကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ် … ရိုးရှင်းလှတဲ့သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ကြားမှာ ဘယ်သူတွေ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်ကြမလဲ ? သူတို့ရဲ့အချစ်ခရီးလမ်းဟာ သာယာဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါ့မလား? ဘယ်လိုကံကြမ္မာတွေက သူတို့ကြားမှာ ဘယ်လိုသဘောထားကွဲလွဲခြင်းတွေ ပေးမှာပါလိမ့်? Drama ချစ်သူတွေအတွက်ကတော့ ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးမယ့် Animeလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်....
1Episode5/ 720p Mediafire
1Episode5/ 720p WATCH
1Episode6/ 720p Mediafire
1Episode6/ 720p WATCH
1Episode7/ 720p Mediafire
1Episode7/ 720p WATCH
1Episode 8 / 720p Mediafire
1Episode 8 / 720p WATCH
1Episode9/ 720p Mediafire
1Episode9/ 720p WATCH
1Episode 10 / 720p Mediafire
1Episode 10 / 720p WATCH
1Episode 11 / 720p Mediafire
1Episode 11 / 720p WATCH
1Episode 12 / 720p Mediafire
1Episode 12 / 720p WATCH